Ny lalamby dia lalana andehananny fiarandalamby izay vita vy roa miraizotra izay voatazona aminny alalanny hazo fitazonana izay mitoetra eo ambony ballast.
Ny famaky dia fitaovana fanapahana marani-dela vita amin ny metaly, indrindra amin ny vy na tsy, misy tahony, izay matetika ampiasaina hamakiana na hanapahana hazo na zavatra mafy sady azo atao fitaovam-piadiana.
Ny Arameana na Aramiana dia vahoaka niaina tao Atsinanana Akaiky taminny Andro Taloha izay nonina taminireo faritri Siria sy Mesopotamia taminny taonarivo voalohany tal. J.K. Maro ireo fanjakana arameana madinika izay nandroso taminny taonjato fa ...
Ny penina dia taho kely fanoratana, vita aminny hazo na vy na akora hafa izay mifangaro na tsia, izay loaka anaty mba ahafahanny tsirano-menaka miloko mitsotsorika midina tsikelikely milelaka ny tendrony ambany boribory. Ka ny fiodinanio farany n ...
Ny andriamanitra masoandro dia andriamanitry ny lanitra, maneho ny masoandro na moseho amin ny alalan ny masoandro izay maneho ny hery sy ny tanjany. Ny andriamanitra masoandro sy ny fivavahana amin ny masoandro dia fahita amin ny tantara maro am ...
Ny tetiandro manara-masoandro dia tetiandro ahitana volana roa ambinny folo nefa tsy miankina aminny fihodinanny Volana aminny Tany fa ahitana fampifanandrifiana ny tsingerin-taona aminny tsingerim-pihodinanny Tany aminny Masoandro na aminny tsin ...
Ny tetiandro manara-bolana sy masoandro dia tetiandro anitana volana mitovy faharetana aminny tsingerim-pihodinanny Volana aminny tany araka ny hitanny maso, sady ahitana volana miisa roa ambinny folo, nefa misy fampifanandrifiana ny tsingerin-ta ...
I Masoandro Tsy Resy na Sol Invictus, amin ny teny latina, dia andriamanitra masoandro nivavahana tao amin ny Empira rômana tamin ny taonjato faha-3. Naka ny endrikty ny fedrà momba an i Apôlô sy ny fombam-pivavahana amin i Mitra ny fivavahana ta ...
Ny afelia dia teboky ny lalan ny zavatra eny amin ny lanitra mihodidina ny Masoandro izay manalavitra indrindra ny ivon-danjan ny Masoandro. Ny perihelia no mifanohitra amin ny afelia.
Ny perihelia dia teboky ny lalan ny zavatra eny amin ny lanitra mihodidina ny Masoandro izay manakaiky indrindra ny ivon-danjan ny Masoandro. Ny afelia no mifanohitra amin ny perihelia.
I Jopitera no planeta lehibe indrindra ao aminny rafitry ny Masoandro, mavesatra kokoa noho ny fitambaranireo planeta hafa mikambana izy sady planeta fahadimy raha ny elanelany aminny Masoandro no heverina.
Ny tetiandro gregôriana na kalandrie gregôriana dia tetiandro manara-masoandro noforonina taminny faraparanny taonjato faha-16 izay natao mba hanitsiana ny fahadisoanny tetiandro joliana nampiasaina taminizay. Ny Papa Gregôrio XIII no nampanao az ...
Ny tetiandro armeniana dia tetiandro nentim-paharazana ampiasaina ao Armenia. Tetiandro manara-masoandro ny tetiandro armeniana izay mifototra aminny fitsipika mitovy aminny anny tetiandro egiptiana tamin ny Andro Taloha izay ahitana taona misy a ...
Ny fanandroan-kintana dia fanandroana miankina tanteraka amin ny kintana na ny antokon-kintana izay azo jerena tokoa eny amin ny lanitra. Mety ho ny maso fotsiny no enti-mijery izany mivantana na amin ny alalan ny fampiasana fitaovana moderna. Mi ...
Ny taona dia fotoana aharetanny tsingerim-pihodinny Tany aminny Masoandro na tsingerim-potoana mifandraika aminny fitsingerenanny fizaran-taona iray ka manodidina ny 12 tsingerim-bolana eo ho eo izany. Miankina aminny zavatra eny aminny lanitra a ...
Ny Virjiny dia antokon-kintanny zôdiaka andalovan ny masoandro amin ny 16 Septambra hatramin ny 30 Oktobra. Ny antokon-kintan ny Liona no eo andrefany fa ny an ny Mizana kosa no eo antsinanany. Avy amin ny teny arabo dia atao hoe السنبلة / As-Sum ...
Michael dia horonantsary aostrisianina navoakani Markus Schleinzer taminny taona 2011 izay mitovy aminny trangani Natascha Kampusch aminny lafinny mpaneloka. Izy io dia nifaninana taminny horonantsary hafa tao aminny fetibeni Cannes 2011. Io no h ...
I Adama sy i Eva, araka ny Bokin ny Genesisy ao amin ny Baiboly sy ao amin ny Soratra Masin ireo fivavahana abrahamika hafa, dia ireo olombelona roa voalohany noforonin Andriamanitra teto ambonin ny tany, izay razambe nitaranaka ny olombelona reh ...
Ny Fiangonana Loterana Malagasy, izay hafohezina amin ny hoe FLM, dia fiangonana kristiana protestanta eto Madagasikara izay nateraky ny fitambaran ireo fikamba nana misionera loterana tamin ny taona 1950 niasa teto Madagasikara, sady miray amin ...
Ny batisa ho an ny maty na batemy ho an ny maty dia batisa na batemy raisin ny velona nefa tanterahina ho an ny olona efa maty mba hamonjena azy. Tanterahin ny fiangonana kristiana maro sy fivavahana tsy kristiana sasany ny batisa ho an ny maty. ...
Ny Fariseo na Farizianina dia ireo Jiosy amin ny antoko iray tao Jodea nandritra ny vanimpotoan ny Tempoly Faharoa, izany hoe tamin ny taonjato faha-2 tal. J.K. sy ny taonjato voalohany taor. J.K. Atao hoe farisaisma na farizianisma ny firehan-ke ...
I Roanda-Orondy dia isanny empiranny mpanjanatany alemàna tao Afrika, fitambarani Roanda sy Borondy ankehitriny, izay nomenny Fikambananny Firenena ho eo ambany fiahiani Belzika taminny taona 1919 rehefa resy taminny Ady Lehibe Voalohany I Alemai ...
Ny toekaren i Roanda dia toekarena isan izay nivoatra indrindra aty Afrika taorianny fampihavanam-pirenena sy ny firosoana aminny demôkrasia ary ny fampiharana ny fahaiza-mitantana tao aminy. Ny ady an-trano tao aminity firenena ity dia namotika ...
Ny fiteny ao Roanda dia ahitana indrindra ny fiteny kiniaroanda, ny fiteny frantsay, ny fiteny anglisy ary ny fiteny soahily. Ny fiteny kiniaroanda sy ny fiteny frantsay ary ny fiteny anglisy no fiteny ofisialin’i Roanda. Ny fiteny soahily izay f ...
Ny jeôgrafiani Roanda dia faritanny maha tany mitoka-monina ity firenena ity ao aminny faritry ny Farihy Lehibe, izay tsy manana sisin-dranomasina. Ao Afrika Afovoany sy Afrika Atsinanana no misy ani Roanda, izay firenena manana velaran-tany mire ...
Ny Hoto, izay atao hoe Bahoto koa, dia vahoaka miteny banto ao Roanda sy Borondy, ao amin’ny faritra anelam-parihy ao Afrika Afovoany. Ny fitenin’izy ireo no lasa fitenin’ny Totsy koa. Araka ny famaritana taminny andronny fanjanahan-tany dia mpam ...
I Jean Kambanda dia piraiminisitry ny goveremanta mpisolo toerana vonjimaika nandritra ny famongoran-taranaka tao Roanda. Teraka taminny 19 Ôktôbra 1955 izy. Nampangaina ho tomponadraikitra taminilay famongoran-taranaka izy, toy ny ankamaroanireo ...
Ny fiteny kiniaroanda dia fiteny banto izay teteninny vahoaka ao aminny tapany iray aminny faritry ny Farihy Lehibe ao Afrika, Fitenim-pirenena izy ao Roanda ka saika ny vahoaka roandey manontolo no miteny aminy, izay ahitana fiovana isam-paritra ...
I Faustin Twagiramungu dia mpanao pôlitika roandey avy ao aminny foko Hoto izay nahazo ny zo maha olom-pirenena belza azy. Teraka taminny 14 Aogositra 1945 tao aminny faritanini Cyangugu izy. Izy no piraiminisitra tao Roanda taminny taona 1994 ha ...
I Dominique Mbonyumutwa dia mpanao pôlitika roandey izay lasa filohanny Repoblikani Roanda taminny 28 Janoary 1961 hatraminny 26 Ôktôbra 1961. Teraka taminny 1921 tao Mwendo ao Roanda izy ary maty taminny 26 Jolay 1986 tao Grand any Belzika.
I Cyprien Ntaryamira dia mpanao pôlitika lasa filoham-pirenen’i Borondy nandritra ny roa volana, teraka tamin’ny 6 Marsa 1955 tao amin’ny havoanan’i Gitwe, kaomioninan’i Mubimbi, faritanin’i Bujumbura, ary maty nisy namono tamin’ny 6 Avrily 1994 ...
Ny afo fandiovana, araka ny fampianaran ny Eglizy katolika indrindraindrindra, dia ny fanavotana ny fanahinny olona aorian ny fahafatesana, izay anadiovana azy hoafaka amin ny fahotana mila ny famelan-keloka avy amin Andriamanitra, na izay ianjad ...
Ny Vavak i Azariasa sy ny Tonon-kiran ireo Zatovolahy telo ao anaty afo dia lahatsoratra ao amin ny Bokin i Daniely ao amin ny Baiboly katolika sy ao amin ny Baiboly ortodoksa izay tsy hita ao amin ny Baiboly hebreo sy ao amin ny Baiboly protesta ...
I Lota dia olona voatantara ao aminny Baiboly. Ny ankohonany no afa-nandositra ny fandoroanAndriamanitra ani Sodoma sy i Gomora izay nilatsahanny afo sy solifara. I Haràna zanaki Tera sady rahalahini Abrahama sy i Nahora no raini Lota. Taminny na ...
Ny Parsỳ na Parsa dia vahoaka iraniana nifindra monina any India, mba hahafahan izy ireo manohy ny fanarahany ny fivavahany, dia ny parsisma, fivavahana nisampana avy amin ny zôrôastrisma. Iray amin ireo fianakaviambe zôrôastriana monina any Indi ...
Ny Gehena dia lohasaha tery sady lalina eo akaiky atsimo sy atsimo andrefani Jerosalema izay nanamboarani Solomona toerana avo hivavahana aminny andriamanitra Kemosy sy Moloka, araka ny Boky voalohanny Mpanjaka. Tao no nanaovanny Israelita sorona ...
Ao amin ny fedrà grika dia Tartarôsy no iantsoana ny toerana misy varavaram-by sy tolam-baravarana alimo, izay anonerana ny hadisoana sady ahitana ny fampijaliana rehetra. Ao no ametrahana ireo mpanao heloka bevava. Atao hoe Τάρταρος / Tártaros i ...
Ny Fanjakani Hadesy na Hadesy, ao aminny fedrà grika, dia ny fanjakanny maty. Toerana any ambaninny tany izany izay anjakanilay andriamanitra atao hoe Hadesy, ka izany no ilazana izany toerana izany hoe "fanjakani Hadesy". Ny Hadesy ao amin ny fe ...
Ny Adaoro no vintana faharoa ao amin ny fanandroana malagasy. Ny Alahamady no eo alohany ary ny Adizaoza no manaraka azy. Ny tapany avaratra amin ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. Lazaina fa mifandratra amin ny Alakarabo sady miha ...
Ny Seôla na Seôly, araka ny finoan ny Jiosy, dia ny fitoeran ny maty, ny fasana iraisan ny olombelona rehetra. Tsy fantatra na any an-koatra izany na tsia. Ny Baiboly hebreo dia manoritsorita azy ho toerana tsy misy fahafinaretana izay itoeran ny ...
I Ahora Mazda dia ilay Andriamanitra lehibe ivavahana ao aminny mazdeisma. Avy aminny anarana aminny teny persiana taloha hoe Auramazdâ izay midika hoe "Tomponny Fahendrena" io anarana io. Taorianny fanavaozana ny fivavahana mazdeana nataoni Zara ...
I Gomora dia tanàna kananita taloha voalaza ao aminny Baiboly izay nodoranAndriamanitra niaraka aminny tananani Sodoma taminny afo sy ny solifara noho ny fahotana mihoapampana nataonireo mponina ao, araka ny voalaza ao aminny Bokinny Genesisy. Ar ...
Ny Bokin i Daniela na Bokin i Daniely dia boky hita ao amin’ ny Baiboly hebreo sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Amin’ ny voalohany ny boky dia mitantara ny amin’ ny zatovolahy hebreo efatra izay samy avy ao amin’ ny ...
Ny hoe roy dia anaran ny hazo madinika isan-karazany amin ny teny malagasy, izay amin ny ankapobeny misy tsilo. Mba hampiavaka ny anaran ny zavamaniry tsirairay dia misy tohiny io anarana io. Ireto ny sasany amin ireo zavamaniry ireo: roibe Hibis ...
Zavamaniry ny madagasikara. Fleur de Noel no fiantsoana azy amin ny teny frantsay. Ny nahatonga ny anarany hoe madagasikara dia satria rehefa aforitra roa ny raviny dia toa manome ny sarin-tanin i Madagasikara.
Rafitra aminny alalanio mitombo ny ankamaroanny zavamaniry. Mampiasa ny hirana avy aminny masoandro fa manambatra ny karbaona taminny gazy karbonika aminny hydrogène taminny rano, fa manao molekiola gliokaozy ny zavamaniry. Ny karbaona aminny gaz ...
Ny sakay dia zavamaniry avy any amin ny faritry ny zanapehintany any Amerika, izay hanim-boa, ahitana vihy maro, atao fanatsarana ny tsiron-tsakafo. Misy karazany 10 sy zana-karazana maro ny sakay. Amin ny ankapobeny dia maniry isan-taona ny saka ...
Karazana zavamaniry mihinam-bibikely ny Dionaea muscipula. Mitombo aminny heniheny Amerikanina aiza ny tany manome sakafo mahantra fa ny zavamaniry ny Dionaea muscipula. Mamandrika ay laninny lalitra sy ny moka ity mahazatra zavamaniry.
Joany mpanoratra evanjely sy epistily ..